Intloko ye-Waikato Chamber of Commerce ibongoza urhulumente ukuba angabonakali kwiprojekthi elungiselelwe umhlakulo
Zinc ingxubevange Door Stopper Series
UDon Good, umlawuli olawulayo weWaikato Chamber of Commerce, ugxeke urhulumente kuba ilizwe linazo iiprojekthi ezinokuthi zityhutyhwe ngokukhawuleza e-Waikato, ngelixa iikontraki zomphakathi zilinde ukuba iiprojekthi zamkelwe.
Urhulumente khange abhengeze uninzi lweeprojekthi zomhlaba zokulungiselela umhlakulo. Nangona kunjalo, iBhunga lesiXeko saseWaikato licebise iiprojekthi ezingama-23 kurhulumente ophakathi ngo-Epreli, zizonke zizigidi zeedola zase-US eziyi-2.8.
Malunga ne- $ 150 yezigidi ibekelwe i-Waikato, ebandakanya iiprojekthi ezilungele umhlakulo ezifana nokuphuculwa kweeHamilton Gardens kunye nezixhobo zebhayisekile kuso sonke isixeko.
Kwileta eyayisiya kumalungu eQela lezoRhwebo, uGoode wathi urhulumente uyalibazisa ukubhengezwa kwezi projekthi kwaye ulahlekile kwindlela yoburhulumente yokwandisa iprojekthi yokwandisa iCambridge iye ePiarrell kwiWaikato Expressway naseSouth Link.
“Wenza ntoni urhulumente ngeBhunga lesiXeko saseHamilton, iBhunga leSithili saseWaipa nazo zonke iiprojekthi zokulungiselela ukwakhiwa kwemikhosi emikhulu ezacetywa liBhunga lesiThili laseWaikato kwiinyanga ezintlanu ezidlulileyo?
"Ayithandabuzeki into yokuba, yayisisiqubulo sezakwalizwi ngelo xesha, sinika ithuba amagosa aphezulu abiza kakhulu eWellington ukuba avelise iingxelo zokumisa, ngoku eziqokelela uthuli ezishelfini zearhente zikarhulumente."
“Siyakuqonda ukuzincama okufunekayo ukulungiselela iCovid-19. Siyinxalenye yeqela lezigidi ezi-5 kwaye sizincamile. Kodwa iinyanga ezintlanu zokuphuhlisa isicwangciso sokunceda uqoqosho lubuye lide kakhulu.
“Indlela yokulungisa umhlakulo ilula. Sizivalelele ngaphakathi, kwaye iinkokheli zethu kufuneka zenze imali kwiiprojekthi ezibonelela ngeziseko zophuhliso ezininzi, ezizisa imisebenzi kubantu abaninzi.
“Oku kuyakwenza ukuba abantu baqiniseke. Imali iya kutyhala imali kuqoqosho, kwaye imali esesandleni iya kunika abantu ukhuseleko. Ngokuqiniseka nangokhuseleko, unokunika abantu ukuzithemba.
“Siyavuya ukungqina ukuba asilunganga. Kuyasivuyisa ukuva isibhengezo esibalulekileyo ngomso sokuba imali yeeprojekthi ezinkulu zivunyiwe. Iinkampani zifuna ukusebenza. ”
"Ummandla waseWaikato ufuna ukuzithemba kwikamva ukuze sibuyele emva ngo-2020. Ngoku sicela iinkokheli zethu zikhokele: Musani ukusiphoxa."
Nangona ithemba likaGood limfiliba, iziphumo zovavanyo lweshishini lokwakha zibonisa ukuba "ngesiVumelwano soKwakha", iSanshui Reform kunye neKhomishini yeZiseko zaseNew Zealand sele iqalile ukuba nefuthe kuzinzo kwimibhobho yomsebenzi, kwaye ishishini libona ukukhanya ikamva.
Iikontraki eziguquguqukayo zaseburhulumenteni zithatha uthotho lwamanyathelo okumelana nemiceli mngeni yexesha elifutshane kukungena kwemali, ukungaqiniseki kwiinkqubo zomsebenzi, kunye nezivumelwano ezirhoxisiweyo / ezandisiweyo.
Njengoko oorhulumente basekhaya nabasembindini be-akhawunti ye-75% yabathengi beshishini lokwakha, iikontraki zilindele ukuba isicwangciso sikarhulumente sokuphucula iNew Zealand sibe nefuthe elihle, i-69% yabo ilindele impembelelo entle kwisithuba seminyaka emithathu, kwaye izibhengezo zeziseko zophuhliso ezilungeleyo ziya kuba neNcedo lokulinganisa ukuncitshiswa kwenkcitho yoorhulumente basekhaya ngenxa yefuthe likaCovid-19 kuhlahlo-lwabiwo mali.
UPeter Silcock, iGosa eliyiNtloko lesiGqeba seKontraka yoKwakha abaSebenzi baseNew Zealand, uthe: "Ngaphandle kwemeko yezoqoqosho enzima, uninzi lweekhontrakthi zizithembile ekomeleleni kwaye zinethemba lokugcina nokugcina abaqeshwa babo phantsi kweemeko ezithile."
"Iikontraki kuyakufuneka zithathe amanyathelo okuqinisekisa ukuba ishishini labo liyakwazi ukumelana nokwehliswa kwexesha elifutshane komthwalo womsebenzi kwezi nyanga zimbalwa zizayo, phambi kweeprojekthi ezicwangciselwe iminyaka emihlanu ezayo."